Archive eChikamu: Fibromyalgia
Fibromyalgia chirwere chisingaperi chinorwadza icho chinowanzo kupa hwaro hwehuwandu hwezviratidzo zvakasiyana nezviratidzo zvekiriniki. Pano iwe unogona kuverenga zvimwe pamusoro pezvakasiyana zvinyorwa zvatakanyora nezvechirwere chisingaperi chinorwadza fibromyalgia - uye kwete zvirinani kuti ndeapi marapiro uye matanho epamoyo aripo ekuongororwa uku.
Fibromyalgia inozivikanwawo seyakanyorova rheumatism. Mamiriro acho anogona kusanganisira zviratidzo zvakadai sekurwara kusingaperi mumapundu uye majoini, kupera simba uye kushushikana.
Mazano 7 Ekutsungirira neFibromyalgia
13 / 06 / 2017 /1 Comment/i fibromyalgia, Kurwadziwa kusingaperi/av kundikuvadza
Matipi 7 Ekutsungirira NeFibromyalgia
Dhara fibromyalgia uye zvekufamba pamusoro pemadziro? Ngatikubatsirei.
Fibromyalgia inogona kukonzera matambudziko makuru muhupenyu hwezuva nezuva. Zvinogona kunge zvakaoma chaizvo kuva nechirwere chisingaperi chekurwadziwa. Heano 7 matipi uye zviyero zvinogona kukubatsira kudzoreredza zvakajairwa zviratidzo zve fibromyalgia uye kuita kuti zuva rako rive nyore.
- Pamwe chete Kuwedzera Kunzwisisa kweChronic Pain Syndromes
Vakawanda veavo vane kurwadziwa kusingaperi vanonzwa kuti havanzwiki kana kuti kutorwa zvakakomba. Izvozvo hazvigoni kubvumirwa kuti zvive zvakadaro. Isu tinomira nevaya vanobatwa nekurwadziwa kusingaperi uye tinokumbira nemutsa kuti mugovane chinyorwa ichi pasocial media kuti muwedzere kunzwisisa kwakatenderedza chirwere ichi. Ndinokutendai mberi. Inzwa wakasununguka kutitevera kuburikidza Facebook og YouTube.
-Kumadhipatimendi edu akasiyana-siyana kuVondtklinikkene muOslo (Lambertseter) uye Viken (Eidsvoll Inzwi og Råholt) varapi vedu vane unyanzvi hwepamusoro hwakasiyana-siyana mukuongorora, kurapwa nekugadzirisa kudzidziswa kwemarwadzo asingagumi. Nesu, iwe uchagara uchitorwa zvakanyanya. Dzvanya pane zvinongedzo kana pano kuti uverenge zvakawanda nezvemadhipatimendi edu.
Skroka pasi kuti uone maviri makuru ekurovedza muviri mavhidhiyo ane maekisesaizi uye nzira dzekuzorodza dzinogona kubatsira kwauri nefibromyalgia.
Sei? Joinha boka reFacebook «Rheumatism - Norway: Tsvagurudzo uye Nhau»Nezvezvino nyowani patsvagurudzo dzekutsvagira uye midhiya nezve izvi uye nezvimwe zverheumatic matambudziko. Pano, nhengo dzinogona zvakare kuwana rubatsiro uye rutsigiro - panguva dzese dzezuva - nekugovana zvavo zviitiko uye zano.
1. Kushushikana pasi
Kushungurudzika kunogona kukonzera uye kukonzera "flare ups" mu fibromyalgia.
Kuderedza kushushikana muhupenyu hwezuva nezuva kunogona kutungamirira kune hupenyu huri nani uye zviratidzo zvishoma. Dzimwe nzira dzinokurudzirwa dzekubata nekushushikana i yoga, kufunga, acupressure, kurovedza muviri uye kufungisisa. Maitiro ekufema uye kugona nzira dzakadai anokwanisa kubatsira.
- Tora nguva yekuzorora
Dzidza kuzvitora nyore iwe pachako munguva yemazuva ano inogadza mipimo yakakwirira. Isu tinokurudzira zvakasimba chirongwa chekuzorora chemazuva ese acupressure bonde (tinya pano kuti uverenge zvimwe - chinongedzo chinovhura muhwindo idzva). Musiyano uyu unewo piro inosanganisirwa yehuro inoita kuti zvive nyore kushanda mumhasuru dzakasimba kumusana nemutsipa.
Verenga zvakare: 7 Anozivikanwa Anotangisa Kuti Aggravate Fibromyalgia
Dzvanya pane iyi link yepamusoro kuti uverenge chinyorwa.
2. Kugara Kwakagadziriswa Kudzidziswa
Kurovedza muviri ne fibromyalgia kunogona kuve kwakaoma zvikuru.
Zvakadaro, mamwe maekisesaizi anogona kushanda nemazvo - sekugara, kudzika-simba maekisesaizi, sekufamba kana kuita maekisesaizi mudziva remvura inopisa zviri pakati pemishonga yakanakisa yefibromyalgia.
Inogona kukubatsira iwe kudzikisa marwadzo uye kuomarara, pamwe nekukupa yakawedzera pfungwa yekutonga pamusoro pekurwara kurapwa kwekuongororwa. Taura nachiremba wako, physiotherapist wako, chiropractor yako kana chiremba kuti uone rudzi rwechirongwa chekurovedza muviri chingave chakakunakira - isu tinofarawo kukubatsira kuburikidza neYouTube chiteshi kana imwe yemakiriniki edu akasiyana-siyana kana uchida.
Fibromyalgia inokonzera kurwadziwa kusingaperi uye kusindimara mumhasuru yemuviri uye majoini. Heano mashanu-kurovedza Workout chirongwa chinogona kukubatsira kuti uchengete musana wako, chiuno uye pelvis ichifamba. Dzvanya pazasi kuti uone maekisesaizi.
VIDEO - 7 Exercises yeRheumatists:
Iyi vhidhiyo haina kutanga kana iwe ukaipidigura? Edza kumutsidzira browser rako kana uzvitarise zvakananga paYouTube chiteshi. Zvakare rangarira kunyorera - zvachose mahara - kune chiteshi kana iwe uchida zvimwe zvakanaka zvirongwa zvekudzidzisa uye kurovedza muviri.
3. Bhati inopisa
Iwe unofara here kuzorora mubhati rinopisa? Zvinogona kukuitira zvakanaka.
Kunyepa mubhavhu rinodziya kunogona kukonzera kuti mhasuru dzizorodze uye kurwadziwa kurizorodza denga zvishoma. Mhando yekupisa iyi inogona kusimudza mwero weendorphin mumuviri - unovharira masaini ekurwadziwa uye unogona kutungamira mukuvandudzika kwekurara. Isu tinokurudzira kushandiswa kwe reusable heat pack (ona muenzaniso pano - chinongedzo chinovhura muhwindo idzva). Iyo paki inoshanda nekuipisa uye wozoiisa pane yakaoma uye inorwadza tsandanyama.
4. Deredza pasi Caffeine
Unoda kapu yakasimba yekofi? Inogona kuva tsika yakaipa kwatiri ne fibro, zvinosuruvarisa.
Caffeine inosimudzira yepakati- izvo zvinoreva kuti inokurudzira moyo uye wepakati tsinga system kuve mu 'yakakwira kuchenjerera'. Kana tsvagiridzo yaratidza kuti ne fibromyalgia isu tine overactive nerve fibers, tinoona kuti izvi hazvisi izvo zvakanakisa. Asi isu hatisi kuzokutorera kofi yako zvachose - izvo zvingadai zvakaitwa zvakashata zvakanyanya. Zviri nani edza kudzika pasi zvishoma.
Izvi zvinogona kutungamira kurara uye kugona kunetseka. Saka edza kudzikisira kudya kwefefeine, sevaya vane fibromyalgia vatova nehusimbe hwehuropi. Kunyanya kukosha ndeyekuti iwe unodzivirira kofi uye zvinwiwa zvemagetsi kubva masikati kusvika mberi. Zvimwe ungayedza kuchinja kune sarudzo dzakagadziriswa?
Verenga zvakare: Aya ndiwo e7 Mhando Dzakasiyana dzeFibromyalgia Pain
Sarudza imwe nguva yako wega - zuva rega rega
Nguva chaiyo inogona kuve yakanyanya kukosha kwatiri ne fibromyalgia.
Fibromyalgia inogona kuomesa hupenyu nematambudziko ese ainokanda pauri.Saka ita shuwa kuti wazvisarudzira nguva yega zuva rega rega sechikamu chekuzvitarisira kwako. Nakidzwa nekunakidzwa kwako, teerera kumumhanzi, zorora - ita zvinoita kuti unzwe zvirinani.
Kuzvifunga nguva yakadaro kunogona kuita kuti hupenyu huve hwakaringana, kuderedza huwandu hwekushushikana mumuviri wako uye kukupa simba rakawanda muhupenyu hwako hwezuva nezuva. Zvichida awa yemwedzi yekurapa kwemuviri (semuenzaniso, kurapwa kwepanyama, chiropractic yemazuva ano kana jekiseni?) inogonawo kuve yakanaka zano?
6. Taura nezvekurwadziwa
Usanyime kurwadziwa kwako. Hazvina kukunakira.
Vanhu vazhinji vane fibromyalgia vanoenda uye vanochengeta marwadzo kune ivo pachavo - kusvikira isingachaendi uye manzwiro anotora pamusoro. Fibromyalgia inokonzeresa kushushikana iwe pachako, asiwo avo vakakukomberedza - saka nekudaro kutaurirana ndiyo kiyi.
Kana iwe usinganzwe zvakanaka - saka taura kudaro. Iti iwe unoda kuva nenguva yekusununguka, kugeza kunopisa kana zvakafanana nokuti ikozvino ndiyo nyaya iyo fibromyalgia iri pamusoro wayo. Mhuri uye shamwari dzinoda kuziva chirwere chako uye chii chinoita kuti zvinyanye kuora. Neruzivo rwakadaro, ivo vanogona kuve chikamu chemhinduro kana iwe uchida rubatsiro.
7. Dzidza kuti HAPANA
Fibromyalgia inowanzoidaidzwa kunzi 'chisingaonekwe chirwere'.
Zvinonzi izvozvo nekuti zvinogona kunetsa kune vari pedyo newe kuti vaone kuti uri kurwadziwa kana kuti uri kutambura wakanyarara. Pano zvakakosha zvikuru kuti udzidze kuzvigadzirira miganhu uye zvaunogona kushivirira. Iwe unofanirwa kudzidza kuti HAPANA apo vanhu vachida chikamu chikuru chako kubasa uye muhupenyu hwezuva nezuva - kunyangwe zvikapesana nehunhu hwako hunobatsira uye hunhu hwako hwepamoyo.
Tinokurudzira vanhu vese vane dambudziko iri kuti vapinde muboka reFacebook «Rheumatism - Norway: Tsvagurudzo uye Nhau»- apa unogona kutaura nezve mamiriro ako uye uwane mazano akanaka kubva kune vanhu vane mafungiro akafanana.
Inzwa wakasununguka kugovera muSocial Media
Zvakare, saka tinoda å bvunza zvakanakira kugovera chinyorwa ichi munhau dzezvemagariro kana kuburikidza ne blog yako (inzwa wakasununguka kubatanidza zvakananga kuchinyorwa). Kunzwisisa uye kuwedzera kutarisisa ndiyo nhanho yekutanga kune hupenyu hwezuva nezuva hwakanaka kune avo vane kurwadziwa kusingaperi.
Mazano ekubatsira kurwisa fibromyalgia uye chirwere chisingaperi chekurwadziwa.
Sarudzo A: Govera zvakananga paFB - Kopa kero yewebhusaiti uye unamate pane yako facebook peji kana mune inoenderana facebook boka iwe uri nhengo. Kana tinya iro "SHARE" bhatani pazasi kuti ugovane posvo kumberi pane yako facebook.
Bata izvi kuti ugovane zvimwe. Kutenda kukuru kune wese munhu anobatsira kusimudzira kunzwisisika kwekurwara kusingaperi kwekuongorora kurwadziwa uye fibromyalgia!
Sarudzo C: Tevedzera uye wakaenzana Yedu Facebook peji (tinya apa kana uchida)
Tinopa kuongorora kwemazuva ano, kurapwa uye kudzidziswa kwemarwadzo asingagumi.
NEXT PAGE: 5 Movement Exercises kune avo vane Fibromyalgia
Dzvanya pamufananidzo kana chinongedzo pamusoro.
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/7-TIPS-FOR-Å-HOLDE-UT-MED-FIBROMYALGI.jpg?media=1648573622 368 700 kundikuvadza https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 kundikuvadza2017-06-13 20:07:332022-03-22 16:15:26Mazano 7 Ekutsungirira neFibromyalgia
Peji 1 ye11123>»